Mihitsoka Ao Gresy Ireo Mpisoa-ponenana Silamo, Mijanona Ao Mandritra Ny Ramadany · Global Voices teny Malagasy
Mihitsoka Ao Gresy Ireo Mpisoa-ponenana Silamo, Mijanona Ao Mandritra Ny Ramadany
Voadika ny 23 Jona 2016 8:01 GMT
Vakio amin'ny teny Ελληνικά, Español, Swahili, اردو, English
Renna Ramadan nikarakara sakafo iftar (sakafo manokana amin'ny Ramadany) ho an'ny fianakaviany, Syriana avy ao Idlib izay nanantena hihazo an'i Eoropa Avaratra kanefa lasa mijanona ao amin'ny faritra fiandrasan'ny mpandeha ao amin'ny Seranan-tsambo Piraeus Terminal 1 ao Athena, Gresy. Mpitsoa-ponenana sy mpifindra monina an-jatony maro no mijanona ela ao Piraeus, rehefa nampanantena hamindra ny olona any amin'ny toby hafa ny manampahefana Grika. Sary: Jodi Hilton/Pulitzer Center
Ity lahatsoratra nosoratan'i Jeanne Carstensen ity dia nivoaka voalohany tao amin'ny PRI.org tamin'ny 10 Jiona 2016, ary navoaka eto indray noho ny fifanarahana fifampizarana votoaty.
Tamin'ny alina voalohan'ny Ramadan, nilahatra haka sakafo manokana hanapahana ny fifadian-kanin'izy ireo ny mponina ao amin'ny toby misy tranolay vonjimaika ao amin'ny seranan-tsambon'i Piraeus ao Athena.
Satria mody ny masoandro aorian'ireo sambo be dia be mitondra ireo mpandeha any amin'ny nosy Gresy, mpitsoa-ponenana an-jatony misanehaka, reraka no milahatra eo anoloan'ny tranofiara ao amin'ny toerana lehibe fitobian'ny fiara. Tsy nihinan-kanina sy nisotro rano izy ireo nanomboka teo amin'ny 4 ora maraina teo.
Mazava fa miezaka manohana ireo mpitsoa-ponenana mandritra ny Ramadany ny fitondram-panjakana Grika. Saingy na izany aza, ratsy dia ratsy ny toe-piainana ao Piraeus.
Nilaza i Hedda Grew, mpilatsaka an-tsitrapo ao amin'ny Ekipa Fikambanana Tsy Miankina Soedoà fa mampitombo fotsiny ny ady eo amin'ireo olona efa diso fanantenana amin'ny toe-javatra iainan'izy ireo ny fifadian-kanina Ramadany. “Tsy afaka misotro rano, tsy afaka mihinan-kanina izy ireo, mipetraka fotsiny ao anaty tranolay mafana mandritra ny tontolo andro izy ireo, ary fitambaran'ny Ramadany sy ny fiandrasana izany,” hoy izy.
Misy ny fiandrasana elabe.
Nandeha tany amin'ny toerana mangina ao amin'ny toby aho ary nifanena tamin'i Amal Herh, renim-pianakaviana mahafatifaty manan-janaka efatra avy ao Aleppo
Midika hoe “Fanantenana” ny anarany, “Manana fanantenana be dia be aho”, hoy izy. “Saingy ankehitriny, tsy maintsy matanjaka, matanjaka kokoa ho an'ny fianakaviako aho.”
Mitodika amin'ny lafin-javatra tsara i Amal, saingy tsapako eo amin'ny masony ny fahoriana. Nilaza tamiko izy fa mahatonga azy ho manina ny tanindrazany ny Ramadany.
“Te-handeha ho any Aleppo hamonjy Ramadany aho, miaraka amin'ny fandrahoan-tsakafo sy rano mangatsiaka ary toerana tsara, fa tsy eto,” hoy izy. “Voankazo tsara hafa, fa tsy voasary laoranjy isan'andro. Tsy tia sakafo mitovy foana isan'andro ianao, sa tsy izany?”
Nolazaiko taminy fa mazava tsara amiko izany. Nilaza tamiko ity olona ity fa fotoana tena tsara, miaraka amin'ny fianakaviana, miaraka amin'ny sakafo manokana ny Ramadany.
“Eny,” hoy izy. “Saingy tsy nolazaiko izay azoko lazaina aminao, satria malahelo be aho izao, satria mahatsiaro ny tranoko.”
Ny alina manaraka, nanaiky fanasana amin'ny sakafo Iftar tena isan-karazany miaraka amin'i Anna Stamou, vehivavy Grika nivadika Silamo, sy ny vadiny, Naim El Ghandour, filohan'ny Fikambanan'ny Silamo ao Gresy aho. Teraka tao Egypta i Naim.
Ny fampiharana Ramadany amin'ny findainy dia mampahafantatra ny filentehan'ny masoandro miaraka amin'ny fandraketana antso ho amin'ny vavaka. Eo ambony latabatra, misy ny lalao vazivazy mikasika ny hoe Ejiptiana sa Grika ny salady.
Mandritra ny sakafo Iftar, mandika teny ho an'i Naim i Anna satria miteny Grika izy. Malahelo izy noho ireo mpitsoa-ponenana Silamo an'arivony tsy maintsy mankalaza ny Ramadany ao amin'ny toby. Saingy nilaza tamiko izy fa faly mahita an'i Yannis Mouzalas, minisitry ny fifindramonina Grika manao ezaka mba hanehoana fanohanana mandritra ny Ramadany. “Tena nampahery izany ho anay,” hoy izy.
Ao anatin'ny toe-javatra mahatsiravina ny mpitsoa-ponenana ao Gresy. Saingy feno fankasitrahana i Naim, izay nandositra ny firenena nahaterahany, Ejypta tamin'ny 1967 satria fara faharatsiny, lavitry ny herisetra izy ireo.
“Tsara kokoa izy ireo eto satria raha tany izy ireo, angamba mety hilatsaka eo ambonin'ny lohan'izy ireo ny baomba amin'izao fotoana izao ka tsy afaka mankalaza ny Ramadany, tsy manana na inona na inona izy ireo,” hoy izy.
Saingy ny fitahiana tsara indrindra amin'ny Ramadany dia ny fiafaran'ny ady. “Maniry aho mba hisy ny vahaolana miaraka amin'i Eoropa mba hampitsahatra ny ady,” hoy izy. “Satria izay no olana – ny hampitsahatra ny ady. Te hiverina hody avokoa izy rehetra ireo. Maniry tanteraka tokoa izahay fa hahita anay tsy misy ady intsony ny Ramadany manaraka.”
Taty aoriana, mieritreritra hatrany an'i Amal ao anatin'ny tranolainy indray ao Piraeus aho. Tsy mora ny mahatsapa ny fahamendrahanao voahongozona, indrindra mandritra ny fety. Maniry aho mba ho afaka hitondra rano mangatsiatsiaka sy voasary vao avy novoasana ho azy avy ao Aleppo amin'ny Ramadany.
Jeanne Carstensen sy Jodi Hilton no mitantara momba ny krizin'ny mpitsoa-ponenana any Gresy miaraka amin'ny fanohanan'ny Foibe Pulitzer.